Ogaden News Agency (ONA) – Wafdi ay Itobiya u dirtay Edmonton oo guuldarro kala soo noqday
Wafdi ay Itobiya u dirtay Edmonton oo guuldarro kala soo noqday
Waxaa magaalada Edmonton ee dalka Canada yimid wafti ka socday dawlada Itobiya wafdigaa oo doonayey inuu kulan ku qabto loogu uruurinayo dhaqaale Biyo-xidheen ku sheega ay ka dhisayso Itobiya wabiga Niil. Waxay ku balameen in uu ka dhaco hoolka weyn ee Belmead Community Center maalinta Sabtida ee ay taariikhdu ahayd 20jully, halkaaso ay shirka isugu yimaadeen dad gaadhaya 20 qofood.
Hadaba kulankaa ayaa waxaa ka war helay jaaliyada S.Ogaadeeniya ee magaalada Edmonton oo uu horkacayo isuduwaha jaaliayadaha Canada halgame Yuusuf Ismaaciil iyo gudoomiyaha jaaliyada magaalada Edmonton halgame Ismaaciil C/laahi iyo jaaliyada Oromada, waxayna ka hor-dhigeen banaanabxa aad u balaadhan oo gilgilay madashii shirka.
Waxaa la dalbay booliis gaarka ah ee ka hortaga rabshadaha, taasoo dhalisay ugu dambay in la joojiyo shirkii markii loo cabsaday shacabka gadoodsan ay wax yeelo u gaystaan saraakiishii ka socday dawlad ku-sheegta Itobiya.
Waxaa markiiba soo baxay sarkaal sare oo ka socday ciidamada booliiska ee magaalada Edmonton oo la hadlay dadweynihii meesha ku mudaharaadyey una sheegay in aan wax shir ah dhacaynin lana joojiyey taasoo dhalisay in ay dawlada hoose si degdeg ah bas ugu keento lagana saaro albaabka dambe ee hoolkii lagu shirayey si nabadgelyo ah uga baxaan, waxaana halkaa ku fashilmay hawshii ay u yimaadeen waxayna kala noqdeen iyagoo fara madhan lana ilaalinay.
Guushaa taariikhiga ahna waxaa soo hooyey jaaliyada magaaladaEdmontonoo garabsanaysa jaaliayada Oromada. Dhinaca kale waxaa banaan joog ahaa dhamaan saxaafada oo loo diiday in ay gudaha u gasho shirka kaasoo ay diideen kuwii ka socday Itobiya ee meesha yimid taa badalkeediina waxay saxaafadu banaanka ku waraysatay dadkii mudaharaadayey, waxaana uga qayb galay jaaliyada magaalada Edmonton oo waraysi siiyey saxaafadda mudane Maxamed Aadan Dubad madaxa waxbarashada jaaliyadaha Canada kaasoo siiyay saxaafadda warbixin dhinacyo badan taabanayey kana hadlayey xasuuqa ba’an ee lagu hayo shacbiga Soomaalida Ogaadeeniya. Wareysigaa ayaa waxaa lagu soo qaatay dhamaan wararka TV-yada iyo wargeysyada ka soo baxa magaalada Edmonton sida CBCNEWS, CITY TV, Edmonton journal iyo Edmonton sun.
Isku soo wada duuboo jaaliyadu markii ay ogaatay in ay ka guulaysteen cadowgii soo weerar tagay waxay afaafka hore ku qabsadeen dhaantadii hidaha iyo dhaqanka ay u lahaayeen S.Ogaadeeniya waxaana isugu wada yimid dadkii Kanadiyaanka ahaa ee meeshaa joogay iyagoo si weyn uga helay soo bandhigaa ay soo bandhigeen jaaliyadda hidaha iyo dhaqankooda waxayna halkaa kala hoyden farxad iyo rayn rayn.